Vhiki ratinopedza nhasi rave rizere nenhau, kazhinji, kana asiri ese, anga aine hukama nekuvhurwa kweiyo nyowani iPhone 7 uye iPhone 7, iyo Apple Watch 2 uye nyowani AirPods isina waya mahedhifoni.. Kana iwe usingakwanise kunakidzwa, kana kutambura zvichienderana nekuti unozvitarisa sei, yekupedzisira kiyi, Apple yakaturika zuva mushure mekuratidzwa kwepamutemo, vhidhiyo inokosha paYouTube, saka kana uchikwanisa kuchiona chinyararire mukugara kumwe chete, zvinotora maawa maviri, kana sezvaunowana nguva yemahara muvhiki rese.
En IPhone nhau takaita yekutevera kuzere kweiyi mharidzo uye isu takagadzira zvinyorwa zvakasiyana siyana zvichitora ese makuru maitiro ezvigadzirwa zvese zvakapihwa muna Chikumi 7:
IPhone 6s kesi hadzienderane ne iPhone 7.
Iyo 3GB ye RAM ndangariro yeiyo iPhone 7 Plus inosimbiswa.
Iyo nyowani iPhone 7 Plus ine simba kupfuura iyo 12,9-inch iPad Pro.
Iri bhatani idzva reKumba reiyo iPhone 7.
Iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus vane inopfuura yakakwana bhatiri.
Misiyano mikuru pakati peiyo iPhone 6s, 6s Plus, iPhone 7 uye iPhone 7 Plus.
Iyo iPhone 7 garandi haifukidze kukuvara kwemvura, kunyangwe ichirwisa.
Apple inoyambira kuti iyo nyowani iPhone 7 Jet Dema (inopenya nhema) haina kusimba.
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve iyo nyowani iPhone 7 uye iPhone 7 Plus.
Asi panguva yekukosha chizvarwa chechipiri che Apple Watch, inonzi Series 2:
Apple Watch ikozvino inosanganisira ipfupi tambo, chete mita imwe.
Ceramic Apple Watch inotsiva Yekuona Edition.
Iko Apple Watch Series 1 yakasiyana sei neChikamu 2?
Apple Watch Series 2, inogara mumvura uye isina dhizaini nyowani.
ari AirPods Ivo vakatorawo chakakosha chikamu chekusazivikanwa mukusimudzira kweinokosha:
Apple AirPods, zvimwe zvinhu zvaungasaziva.
Iyo 15-mineti kubhadharisa maAirPods kuchatipa maawa matatu emumhanzi.
Iwo maAirPod matsva haazodonha nyore nyore seyekare maParodhi.
AirPods, kunyatso tarisa Apple nyowani isina waya mahedhifoni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Zvakanakisa zvevhiki muActualidad iPhone
Kuenderana kwakazara paApple AirPods kuburikidza neBluetooth
Zvinoenderana neKGI iyo mbiri kamera ichagara yakasarudzika kune iyo Plus modhi